Kwa akwa na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Ngalaba na-ekpo ọkụ maka Pet Warming,PTC Na-ekpocha Ngwákụkụ Maka Pet Pụrụ,Nkịtị Na-ekpochapu Ọkụ n'èzí
Home > Ngwaahịa > Nkịtị Nkịtị Na-emepụta Ihe > Ihe eji emepụta ihe eji emepụta ihe > Kwa akwa na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
Kwa akwa na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
Ihe Nlereanya.: XHC-F036
Ihe mgbochi kpo oku na-ekpo ọkụ na-emekarị nke PTC dị ka ihe ọkụkụ kpo oku. PTC kpo oku film bụ a smart kpo oku film na akara ahụ ike oriri na-akpaghị aka site ịchịkwa ndị na-eguzogide maka onwe ya na-enweghị thermostat .A inogide ihe onwunwe, mmiri na-eguzogide, a nti-ata na-eji na anụmanụ kpo oku na mpe mpe akwa iji hụ na bed doesn`t banye mmiri ma nọrọ na-ekpo ọkụ na-ebute ndụ ogologo oge. Ogo na-edozi n'ezie. .Anyị nwere asambodo na BV, ISO9001 / 14001 / 18000.And Ngwaahịa anyị nwere nkwenye nke CE, RoHS, Ul, ETL, wdg.
N'okpuru terrarium ma obu vivarium Kpọtụrụ ugbu a
PTC okpokoro ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Nkịta na-azụ okpomọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Ngalaba na-ekpo ọkụ maka Pet Warming PTC Na-ekpocha Ngwákụkụ Maka Pet Pụrụ Nkịtị Na-ekpochapu Ọkụ n'èzí Ihe na-ekpo ọkụ maka terrarium Aka na-ekpo ọkụ maka Nkwado Aka na-ekpo ọkụ aka Ngalaba Na-ekpo ọkụ n'Ime Ime Obodo Nkume na-ekpo ọkụ maka Japanese